I-electrical 96 alumina substrate ye-ceramic China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic Plate > I-Industrial Ceramic Plate > I-electrical 96 alumina substrate ye-ceramic
I-Alumina ceramic iyinhlobo yokwakhiwa kwe-ceramics, ngokumelene nokuqhaqhazela, ukumelana kwamandla okushisa, amandla aphakeme, ukuqhuba kahle kwe-thermal, ukulahleka kwegazi, izici zokusebenza kagesi ezizinzile. Isetshenziswa kuma-substrates e-ceramic e-electronic, ukufakwa kwegesi e-ceramic, ama-vacuum, ama-porcelain amadivayisi, ama-spark plugs neminye imikhiqizo. Singenza inxenye ngokushisa okushisayo okucindezelayo, ukucindezela okomile, 200T ubuchwepheshe bokukhiqiza nobuchwepheshe bokukhiqiza nokusekelwa kwe-extrusion njll njll.
Thina, ku-Jinghui Industry Ltd iyinhlangano ehamba phambili yokukhiqiza izingxenye ze-ceramic e-China eminyakeni engaphezu kwengu-12. Okwamanje, imikhiqizo yethu eyinhloko ihlanganisa izakhi ze-ceramic zensimbi, ama-ceramic grinders for pepper / spice / usawoti / isitshalo / ikhofi, ikhomikhali / ipuleti / ishidi / ishidi, ithubhu ye-ceramic / ibhande / umkhonto / induku, izingxenye ze-zirconia ceramic, ubunjiniyela / isakhiwo se-ceramic , izingxenye ze-ceramic seal nokunye.
I-Metall Aln Ceramic Substrates